रक्त समुह अनुसार मान्छेको ब्यक्तित्व पनि फरक फरक हुन्छ। | नेपाल इटाली डट कम
रक्त समुह अनुसार मान्छेको ब्यक्तित्व पनि फरक फरक हुन्छ।
April 10, 2015 — nepalitaly
काठमाडौँ । के तपाईंलाई थाह छ, तपाईंको रक्त समुह कुन हो भन्ने? यदी थाहा छ भने आउनुहोस् तपाईंको रक्त समुहले के भन्छ तपाईंको ब्यक्तित्त्वको बारे । रक्त समुहको बारेमा एक जापानि सस्थाले गरेको अनुसन्धान अनुसार भिन्न रक्त समुह अनुसार मान्छेको ब्यक्तित्व पनि फरक फरक हुन्छ।
समुह ‘ओ’: यो रक्त समुहका मानिसहरु नेत्रित्व गर्न चाहन्छन। इनिहरुलाई जे देख्यो त्यही चहिने स्वभाब हुन्छ। र सफलता नपाउन्जेल सम्म प्रयास जारी राख्ने बानी हुन्छ। नेत्रित्व गर्ने बानी, बफादार, कामुक र आत्माबिश्वास यो रक्त समुहका मानिसको ब्यक्तित्व हो। यो रक्त समुहको मानिसको कमजोरी भनेको घमन्डीपन, अरुको रिस गर्ने बानी र धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन्।
समुह ‘ए’: यो रक्त समुहका मानिसहरु सद्भभाब, शान्ती र संगठन मन पराउछन। अरुसँग मिलेर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने खुबी हुन्छ। यो समुहका मानिसहरु सम्बेदनशील, स्नेही, दयालु ब्यक्तित्वका हुन्छन। यो रक्त समुहका मानिसहरुको कमजोरी भनेको हठी हुनु र चुपलागेर बस्न नसक्नु हो।
समुह ‘बी’: यो रक्त समुहका मानिसहरु केही फरक ब्यक्तित्वका हुन्छन । जस्को आफ्नै फरक बाटो हुन्छ, र हरेक काम आफ्नै तरिकाले गर्छन् । यो समुहका मानिसहरु रचनात्मक र लचिलो स्वभाबका हुन्छन। र जस्तो सुकै बातावरणमा समायोजित हुनसक्छन। तर यो समुहका मानिसको स्वतन्त्र ब्यक्तित्वले उसलाई कहिलेकही परिस्थिती भन्दा निकै टाढा पुर्याउछ र यो नै कमजोरी बन्छ।
समुह ‘एबी’: यो रक्त समुहका मानिसहरुको ब्यक्तित्व निकै शान्त र नियन्त्रित हुन्छ। सबैले मन पराउने स्वोभाबले कसैको आँखामा गढ्दैनन। बिनम्र, मनोरन्जनात्मक र निस्पक्ष यो समुहका मानिस हरुको ब्यक्तित्वको प्राकृतिक हो। तर यो रक्त समुहका मानिसहरु केही बोधो दिमागका र चिसो प्रक्रितीका हुन्छन, र आफ्नो निर्णयले कहिलेकही आँफै अप्ठ्यारोमा पर्नु यीनीहरुको कमजोरी हो।
« एनआरएनको सातौँ विश्व सम्मलेन १४ अक्टुबरदेखी काठमाडौमा
New Year programme in Rome. »